Windows 10 Isaphulelo Sesitshudeni - Sifakwa Kanjani Isicelo (2020 Umhlahlandlela) - Izipesheli
Ungayithola Kanjani Windows 10 Isaphulelo Somfundi?
I-Windows 10 ingenye yezinhlelo zokusebenza ezisetshenziswa kakhulu. Abafundi bathanda i-OS ngenxa yokutholakala kalula. Iningi lezinhlelo zokusebenza liwafanele lawa madivayisi. Imishini yamaWindows isiyintandokazi phakathi kwabafundi baseyunivesithi. Kubaluleke kakhulu ukuba nesistimu yokusebenza yeWindows yakamuva.
Abafundi bathola izinzuzo ngokusebenzisa i-OS. Ungathola isaphulelo sabafundi uma uhlangabezana nenqubo yokufaneleka ye-Microsoft. Kuyindlela yokubuyisela emphakathini yi-tech giant. Kulo mhlahlandlela, sizoxoxa ngakho konke mayelana nezaphulelo zabafundi.
Ngabe iMicrosoft Inayo Isaphulelo Sezitshudeni seWindows 10?
IMicrosoft ayisisebenzisi ngenkuthalo isaphulelo sabo sabafundi. Ngeke uthole noma yimaphi amadili asebenzayo weWindows 10 wabafundi.Kodwa-ke, kulula ukuthola ezinye izinketho. Kunamawebhusayithi ambalwa akunikeza amadili amangalisayo. Namuhla sizobheka iwebhusayithi ye-OnTheHub. Kuyisiteji esinika abafundi amandla.
Ungathola izaphulelo ezingafika kuma-95% kusoftware yezemfundo kuwebhusayithi.Banikela nohlelo lwabasebenzisi be-Windows 10.Abafundi bangathola Windows 10 uhlelo lokusebenza mahhala ngokuphelele. IMicrosoft inguzakwethu osebenzayo wale nkundla.
Okunye Ukunikezwa Kwabafundi ongakufakela isicelo:
Isaphulelo Somfundi We-Microsoft Office
I-Disney Plus Isaphulelo Somfundi
Izinyathelo Zokuthola Windows 10 Isaphulelo Somfundi:
Abafundi bangathola izinzuzo ze-premium ze-Windows 10 nge-OnTheHub. Jabulela i-OS mahhala usebenzisa iwebhusayithi. Uhlobo lwesitshudeni luyafana nohlelo lwebhizinisi lwesoftware. Nazi izinyathelo zokuthola izinzuzo ezinhle zabafundi.
Abafundi bangaqala ngokuvakashela iwebhusayithi esemthethweni. Nasi isixhumanisi sepulatifomu - https://onthehub.com/ . Uzobona iMicrosoft njengozakwethu osemthethweni ekhasini lasekhaya.Abasebenzisi bangasesha uhlelo lwe-Windows 10 Student kuwebhusayithi. Ithuluzi lokusesha liwusizo futhi likunikeza ngokushesha ongakhetha kukho.
Lapho kuvulwa ikhasi lezitshudeni leWindows 10, uyabona ukuthi litholakala mahhala. Abasebenzisi bangachofoza kusheke ukufaneleka kokutholakala kwalokhu kunikezwa.
Kufanele ufake imininingwane emincane ukuthola ukuthi isikole sakho siyasifanelekela yini lesi saphulelo. Abafundi badinga ukufaka izwe labo, isifundazwe, negama lesikole. Sincoma ukuthi ufake yonke imininingwane kahle.
Abasebenzisi abakulungele ukuthola isaphulelo bangabhalisela ukudala i-akhawunti. Ungaqala ukuthola izinzuzo ezinhle zabafundi epulatifomu. Iwebhusayithi idinga ukuthi ubhalise usebenzisa i-akhawunti ye-imeyili .edu. Izokunikeza ukufinyelela okusheshayo kuwo wonke amathuluzi wezohwebo.
Izinzuzo Ezisemthethweni Zabafundi BaseMicrosoft:
IMicrosoft ibuye inikeze ezinye izinzuzo kubafundi. Ungathola isaphulelo esijwayelekile kumadivayisi we-Windows 10. Lokhu kuza namalayisense afakiwe kumadivayisi. Enye inzuzo yokubhalisela i-akhawunti yesitshudeni ukufinyelela mahhala ehhovisi 365. Abafundi bangajabulela izinzuzo ze-premium ngale nkundla. Kuyadingeka kulabo okwamanje abafunda ngezindlela ezikude. Ungabhalisela i-Microsoft office 365 usebenzisa i-akhawunti yakho ye-imeyili nge ngokuchofoza lapha .
Isitolo sabafundi siyindawo enhle yabasebenzisi ukuthola izinzuzo ezinhle kakhulu. Nayi ifayili le- isixhumanisi .
Siyethemba lo mhlahlandlela uphendula imibuzo yakho yokuthi ungasithola kanjani isaphulelo sabafundi seWindows 10. Qala umkhiqizo wakho nge-bang ngale nkundla. Yizame namuhla futhi uthuthukise amakhono akho.
Ama-Emulators ama-5 ahamba phambili we-Android weWindows 10
Ungayisebenzisa kanjani iPluto TV?
I-Chromecast Windows 10 - Landa & Setha (Umhlahlandlela)
mp3 youtube download khulula umculo
i-xbox engasetshenziswanga bukhoma amakhodi wobulungu begolide
itunes sokulanda mahhala iwindi 8
landa i-itunes yama-pc windows 10
impilo ye-putlocker yephathi
guqula i-youtube ibe ngumculo we-mp3